आधुनिक लन्डन वास्तुकलाको नौ आश्चर्यजनक टुक्रा | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | इङ्गल्याण्ड, लन्डन, के हेर्ने
धेरै शताब्दी पुरानो शहरहरू कुनै खास प्रकारको आर्किटेक्चरले चित्रण गर्दैन। तिनीहरू धेरै शताब्दीहरूमा बाँचिरहेका छन् र हुन सक्छ युद्ध वा आन्तरिक स through्कटको माध्यमबाट, यसैले तिनीहरूको सडक र भवनहरू त्यो लामो अस्तित्वको प्रतिबिम्ब हो।
संयुक्त राज्यको राजधानी यी शहरहरू मध्ये एक हो। शताब्दीहरु को बितेको साथ लन्डनमा बिभिन्न वास्तुकला शैलीहरू स .्कट गरिएको छ र यो सार्वजनिक, निजी भवनहरू र अन्य संस्था वा शहरी डिजाइनहरूमा देखिन्छ। तर सत्य यो छ कि पछिल्ला दशकहरूमा यो एक शहर भएको छ अचम्मको आधुनिक वास्तुकला। लन्डन २१ औं शताब्दीको लागि नवीकरण गरिएको छ।
1 लन्डनको बारेमा
2 लन्डनमा आधुनिक वास्तुकला
2.2 हेरोन टावर
2.3 टावर १ 42
2.4 लण्डन सिटी हल
2.5 लोयडको भवन
2.6 लन्डन आँखा
2.7 मिलेनियम डोम
2.9 मिलेनियम ब्रिज
लन्डन यूनाइटेड किंगडमको राजधानी हो र यसको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हृदय हो। यो टेम्स नदीको किनारमा टुक्रिएको छ र दुई हजार वर्ष पुरानो हो। यो रोमीहरूले स्थापना गरेका थिए र त्यो समयमा नाम थियो लन्डिनियम र क्षेत्र रोमन बेलायत थियो।
जब रोमी साम्राज्यको पतन यो भयो, युरोपको बाँकी भागमा के भयो: बर्बर आदिवासीहरू शहरमा अघि बढे र ए एंग्लो-स्याक्सन बन्दोबस्त आकार लिए। धेरै वाइकि inv आक्रमणहरू भोग्नुपरे पनि लन्डन फेरि कहिल्यै पतन हुने छैन र मध्ययुगीन समय र क्रमिक समयावधिहरूमा जानेछ।
यस तरीकाले आज हामी यसको सडकमा देख्छौं कि त्यहाँ उदाहरणहरू छन् बिभिन्न वास्तुकलाहरू: मध्ययुगीन रेनेसान्स, जर्जियन र हामीले माथि भनेजैं समय देखि यस अंशमा धेरै विश्व मा सबै भन्दा राम्रो आधुनिक वास्तुकला को उदाहरण।
लन्डनमा आधुनिक वास्तुकला
आधुनिक वास्तुकलाको धेरै उत्कृष्ट उदाहरणहरू तिनीहरू हुन् वित्तीय जिल्ला मा। हामीसँग छ लोयडको भवन, the मिलेनियम डोम, हेरोन टावर, the मिलेनियम ब्रिज, the सार्ड लन्डन ब्रिज, गेरकिन, ला लन्डन आँखा, ला टावर १ 42 र लण्डन सिटी हल अरु मध्ये। केहि अझ विशेष रूपमा हेरौं:
यसको वास्तविक नाम आइकॉनिक लन्डन भवन यो St० सेन्ट मेरी एक्स छ। यो वित्तीय जिल्ला मा एक वाणिज्यिक गगनचुम्बीन छ। निर्माण २०० 30 मा शुरू भयो र एक बर्ष पछि समाप्त भयो। यसमा flo१ तला र १ 41० मिटर अग्लो छ। यसले वाणिज्य र वित्तको लागि समर्पित भवनको स्थान ओगटेको छ जुन १ 1992 XNUMX २ मा इरा आक्रमणमा क्षतिग्रस्त भएको थियो।
यो भवन हो ऊर्जा कुशल, सँग एक प्राकृतिक वातन प्रणाली र एक प्रणाली छ कि गर्मी र चिसो संरक्षण गर्न मद्दत, मौसम मा निर्भर गर्दछ।
यो गगनचुम्बी यो १११ मिटर अग्लो छ २ 28 मिटर मास्टलाई धन्यवाद। यो छ लन्डनमा सब भन्दा अग्लो भवन। निर्माण २०० 2007 मा शुरू भयो र २०११ मा सम्पन्न भयो। यसको ठूलो प्रवेश र स्वागत क्षेत्र छ र त्यहाँ १२०० भन्दा बढी माछाको साथ एक्वेरियम छ। यो देशको सब भन्दा ठूलो निजी एक्वैरियम हो।
त्यहाँ एक बार - रेस्टुराँ पनि छ पहिलो फ्लोरमा र फ्लोरमा to 38 देखि 40० रेष्टुरेन्ट र ठेठ आकाश - बाह्य टेरेसहरूको साथ बार जुन प्राकृतिक लिफ्टमा पुगेको छ, त्यो केहि पारदर्शी छ।
टावर १ 42
Es लन्डनको सब भन्दा अग्लो गगनचुम्बी भवनहरू मध्ये एक र यो वेस्टमिन्स्टर नेश्नल बैंकको कार्यालयहरू बनाउनको लागि निर्माण गरिएको थियो। यो '70s र मा बनाइएको थियो औपचारिक रूपमा १ 1981 XNUMX१ मा खोलियो। रानी एलिजाबेथ द्वितीयले यो उत्सव र सबै थोकको साथ गर्नुभयो। छ १ 183 मिटर अग्लो र केवल २०० in मा हेरोन टावरले तीस वर्ष शासन पछि यसलाई पार गर्यो।
यो एक वाणिज्य कार्यालय भवन र कम्पनी मुख्यालय हो। 'S ० को दशकमा इराको आक्रमण भयो यसले गम्भीर क्षति पुर्‍यायो र भित्र र बाहिर पुनःस्थापित गर्नुपर्‍यो।
लण्डन सिटी हल
यो नगरपालिका सरकारको सीट हो र थेम्सको दक्षिणी किनारमा छ। छ एक बरु असामान्य डिजाइन यसले संरचनाको सतहलाई कम गरेर उर्जा बचत गर्ने विचारलाई अनुसरण गर्दछ। यो काम गरेन, पछि अध्ययनको अनुसार।
केही व्यक्तिहरू लन्डन सिटी हललाई अण्डासँग वा तुलना गर्छन् darth vader मास्क, स्टार वार्सबाट र कम स्वादको साथ कोहीले यसलाई "गिलास अंडकोष" पनि भनिन्छ। तिम्रो के बिचार छ? डिजाइन को मामला मा, यो एक छ Meter०० मिटर अण्डाकार पदयात्रा न्यु योर्कको गुग्नेहाइम संग्रहालय जस्तो मिल्छ जुन तलबाट यसको टुप्पो सम्म जान्छ १० कहानी भवन.
यो छ अवलोकन डेक जुन कहिलेकाँही सार्वजनिक रूपमा खुला हुन्छ, तर हिंड्ने बाटोमा हिंड्दा तपाईंले भवनको भित्री र वरपर देख्न सक्नुहुन्छ।
यो आधुनिक भवन हो वित्तीय जिल्ला मा र यो प्रसिद्ध लोयडको बीमा हाउसको मुख्यालय हो। यो 70० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो र यसको उद्घाटन १ 80 s० दशकको बीचमा, रानीको हातले फेरि भएको थियो।
यो आधुनिक भवन लिफ्ट, सिढीहरू, पावर स्टेशन र बाहिर पाइपहरू छन्पेरिसको केन्द्र Pompidu¡ou को शैलीमा। यो तीन मुख्य टावरहरू र केन्द्रीय आयताकार ठाँउ वरिपरि तीन सेवा टावरहरू मिलेर बनेको छ।
केन्द्रीय हल, atriumयो एक उडान गिलास छत छ र त्यहाँ खुला ठाँउ र एस्केलेटरहरू सबै ठाउँमा छन्। कूल मापन गर्दछ 88 मीटर, यसमा १ flo फ्लोरहरू छन्।
Es लन्डनमा फेरिस व्हीलक्लासिक फेरिस पा whe्गाहरूको आधुनिक दर्शन जुन हामी विश्वका अन्य शहरहरूमा देख्छौं। यो नदीको दक्षिण तटमा छ र यसलाई मिलेनियम व्हील पनि भनिन्छ। यो १ 183 मिटर अग्लो छ र व्यास १२० मिटर छ.
फेरिस व्हील १ 1999 XNUMX XNUMX मा निर्माण गरिएको थियो नान्चg्ग निर्माण नभएसम्म यो विश्वको सब भन्दा अग्लो फेरिस व्हिल थियो, तर यो अझै छ युरोपमा सब भन्दा उच्च। इस्पात को एक धेरै, धेरै केबल र केहि महान gondolas कि विज्ञान काल्पनिक जस्तै लाग्न।
जब लन्डनमा तेस्रो सहस्राब्दीको शुरुआतको समारोह शुरू भयो, यो भवन शहरको दक्षिण पूर्वमा पर्ने ग्रीनविच प्रायद्वीपमा निर्माण गरिएको थियो। प्रदर्शनी भित्र डिसेम्बर २००० सम्म चल्यो।
Es संसारको सब भन्दा ठूलो गुम्बज मध्ये एक। यो सेतो छ र १२ पहेंलो टावरहरू छन्, वर्षको प्रत्येक महिनाको लागि वा एक घडीको प्रत्येक घण्टाको लागि, हामी अब ग्रीनविचमा छौं। गुम्बज यो १११ मिटर अग्लो छ बीचमा र संग बनेको छ फाइबरग्लास समय बितेको प्रतिरोधात्मक
यो---कथा गगनचुम्बी भवन हो। यो भन्दा थोरै छ 300 मिटर अग्लो र २०१२ मा सम्पन्न हुन १ 1999 2012 XNUMX मा निर्माण गर्न सुरु भयो। यो थियो रेन्जो पियानो द्वारा डिजाइन, प्रसिद्ध प्रतिष्ठित धेरै प्रतिष्ठित आधुनिक भवनहरू र संरचनाहरू मा यसको क्रेडिट।
यो छ घुमाउरो आकारयस्तो देखिन्छ कि यो नदीबाट बाहिर आयो, धेरै गिलास र मेरो विचारमा, एक नाजुक उपस्थिति। यो भवन हो ऊर्जा खपत मा कुशल र यसको फ्लोरहरूमा यसले व्यापारिक कार्यालयहरू, रेष्टुरेन्टहरू, सामयिक व्यवसाय स्कूल, लन्डनमा अल जजीरा कार्यालयहरू, एक होटल, रेस्टुरेन्ट र वेधशाला।
यो एक छ निलम्बन इस्पात पदयात्री ब्रिज त्यो टेम्स नदी पार गर्दछ। शहरलाई बैंकसाइडसँग जोड्नुहोस्। यो तीन भागमा बनेको छ, प्रत्येक अब लामो प्रत्येक, पुल पुग्न एकaसम्म length२325 मिटर कुल कुल लम्बाई आठवटा केबुलहरूले निलम्बित गरे।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » इङ्गल्याण्ड » लन्डनमा पनि आधुनिक वास्तुकला छ
स्पेनमा सब भन्दा सुन्दर क्याथेड्रलहरू